Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အာဘော်နှင့်အမြင် > အယ်ဒီတာ့အာဘော်
ပေါက်တူးကိုင်တဲ့လက်တွေ ဖုန်းတွေ ကိုင်နိုင်စေ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၂၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၁၀၀ တွင် ကိုးဦးမှာ လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လက်ကိုင် ဖုန်းသုံးနိုင်သည့် ထိုကိုးဦး၏ အများစုသည် ...
နံရံတံတိုင်းများ မလိုအပ်ပါ	အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၆ နာရီ ၄၀ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	အချို့က ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို တားမြစ်သည့် ဥပဒေကြမ်း တခု လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရန် စီစဉ်လျက် ရှိနေသည်။ ဤသို့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတခုနှင့် ...
အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေးသည်လည်း အခရာကျသည်	တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၁၁ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	အမျိုးသမီးများကို ပညာသင်ကြားပေးခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင် ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ မိန်းကလေးငယ်များကို ကျောင်းပို့လွှတ် ...
လယ်သမားတို့ လယ်လုပ်ဖို့ လယ်ယာမြေ ပြန်ပေးပါ	သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၀၂ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ သက်တမ်းမှာ ...
ကူညီရာမဲ့ နိုင်ငံသားများနှင့် တာဝန်သိ တာဝန်ရှိ အစိုးရ	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၂၀ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	အခုတလော သတင်းစာမျက်နှာများတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတ်ဖြတ်ခံရသည့် သတင်းများ ဖတ်ရသည်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက် ...
မြို့တော်ဟောင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါစို့	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၂၆ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့မိသားစုအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဟု အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတို့က မကြာခဏပြောဆိုနေကြသည်။ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားများ ...
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ	အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၄၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	မြန်မာအလုပ်သမား လေးသိန်းမျှရှိနေသည့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမားတချို့ တိုက်ခိုက်ခံရမှု သည် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ...
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်	တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၅ နာရီ ၂၁ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတအဖြစ် ရည်မှန်းချက် ရှိထားကြောင်း လူသိ ရှင်ကြား ပြောဆိုထားပြီး ...
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ	သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၆ နာရီ ၁၆ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	မြန်မာနိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့် ရှိနေသည်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုနေသေးသည့်နိုင်ငံ၊ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသော်လည်း အတွေ့အကြုံ ...
မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် ဆင်ခြင်ဖို့နဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၂ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရသစ်သက်တမ်း နှစ်,နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီ။ ယခုအခါ အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ ကျောင်းဖွင့်ရာသီသို့ ...
We have 115 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved